Myanmar Local News: ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပြောခဲ့သော ပြည်ထောင်စုနှင့် တောင်တန်းဒေသ သဘောထား ကောက်နှုတ်ချက်
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပြောခဲ့သော ပြည်ထောင်စုနှင့် တောင်တန်းဒေသ သဘောထား ကောက်နှုတ်ချက်
ပြည်ထောင်စုနေ. နီးလာတာကြောင့် ပြည်ထောင်စုနှင့် ပတ်သက်ပြီး တောင်တန်းဒေသ နယ်ကိစ္စနဲ.ပတ်သက်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုယ်တိုင် မကွယ်လွန်မှီ တလအကျော်မှာ ပြောခဲ့သော စကားတွေဟာ နောင်လာ နောက်သားတွေ အတွက် လေးနက်တဲ့ တွေးခေါ်စရာ စဉ်းစားစရာ မေးစရာ တွေအဖြစ် တန်ဘိုးကြီးမားတဲ့ သမိုင်းအထောက်အထားအဖြစ် ကျန်ရစ်နေဆဲပါ။
ကျွန်တော်တို. တင်သွင်းတဲ့အကြံဥာဏ်တွေ ဒါတွေကို သဘောမကျလို ဆိုလျှင် သဘောမတူတဲ့အတိုင်း တောင်တန်း နယ်ဘက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ သဘောရှိ ဗမာပြည် နှင့် မပေါင်းဘဲ နေချင် နေနိုင်ပါတယ်။
၁၉၄၇ ခု ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ. တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင်း ပြောကြားခဲ့သော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ “လွတ်လပ်သည့် အချုပ်အခြာအာဏာပိုင် မြန်မာနိုင်ငံတော်အတွက် ရေးဆွဲမည့် ဖွဲ.စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေနှင့် ပတ်သက်သည့် လမ်းညွှန်ပြဌာန်းချက်အဆို Directive Resolution မှ ကောက်နှုတ်ချက်။
မူလ ပထမတုန်းက ကျွန်တော်တင်သွင်းရမယ့် အဆိုဟာ ဖဆပလ ပဏာမ ညီလာခံတုန်းက ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ အဆိုဘဲဖြစ်ပါတယ်။ သို.သော်လဲ ဒီအဆိုကို ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါ ပြင်စရာလိုနေတဲ့ အချို. အချက်အလက်တွေကို တွေ.ရပါတယ်။ ဖဆပလ ညီလာခံတုန်းကနေပြီးတော့ ရိုက်ပြီး ဝေထားတဲ့ စာအုပ်ရှိပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ ကြည့်မယ်ဆိုရင် တွေ.ရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ ဆုံးဖြတ်ချက်မူကို ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ ပြင်ဆင်ထားတာကတော့ နိဒါန်းစကားချီးမှာ တောင်တန်းဒေသများနှင့် ကရင်နှီနယ်များ အပါအ၀င်ဖြစ်သော မြန်မာနိုင်ငံတော်သူ နို်င်ငံတော်သားတို.၏ ကိုယ်စားလှယ်များသည် တိုင်းသူပြည်သားတို.၏ အာသီသ ဆန္ဒနှင့် လျော်ညီစွာ နိုင်ငံတော် ဖွဲ.စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေကို စီစဉ်ရေးဆွဲရန် အလို.ငှာ စုံညီစုဝေးရုံလောက်ကလွဲပြီး တခြားသဘောမပါဝင်အောင် ပြင်ဆင်ထားပါသည်။
“ယခု (State) ဆိုတဲ့ နိုင်ငံတော်ကြီးကို ကျွန်တော်တို. ဗမာပြည်မှာ မဖွဲ.စည်းမိကြသေးပါဘူး။ အဲဒီတော့ ဒီဖွဲ.စည်းမယ့် နိုင်ငံတော်မှာ ဘယ်နယ်တွေ ဘယ်နယ်တွေ ပါမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို. ကျကျနန သတ်မှတ်ပြီးသား မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး။ ယခု ကျွန်တော် ဆွေးနွေးရန်အချက်ဟာ နိုင်ငံတော် ဖွဲ.စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေသည် မြန်မာပြည်ထောင်စု နိုင်ငံတော်ဟု ခေါ်တွင်စေသော အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင် သမတနိုင်ငံ ဖွဲ.စည့်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေ ဖြစ်ရမည်ဆိုတဲ့ အချက်ကိုသာ ဆွေးနွေးရန် ဖြစ်ပါသည်။
“ မြန်မာပြည်ထောင်စု နိုင်ငံဆိုတာ ကျွန်တော် အထူး ရှင်းပြောစရာမလိုပါဘူး။ ဒီနိုင်ငံတော်ကို ပြည်ထောင်တွေ စုပြီး ထားမယ်ဆိုတဲ့ သဘောလောက်ပါဘဲ။ ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံတော်ဆိုကတည်းက ကျွန်တော်တို. အခု ဖွဲ.စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံ ဥပဒေဟာ ( Unitary Constitution) လူတမျိုးထဲဆိုတဲ့ နိုင်ငံမျိုးမဟုတ်ဘဲနှင့် လူမျိုးပေါင်းစုံ ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ဗါယ်ရောက်သွားပါတယ်။
“ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်ကနေပြီး ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံတော်အဖြစ် ဖွဲ.စည်းအပ်တယ်လို. အဆိုတင်သွင်းတဲ့ကိစ္စမှာ ယခုကြွရောက်လာတဲ့ အမတ်မင်းများက ဗမာနိုင်ငံတော်ကို ဒီလိုပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်အဖြစ်နဲ. ဖွဲ.စည်းအပ်တယ်လို.ဆိုတဲ့ အခြေခံမူဟာ သင့် မသင့် ကို ဒီလွတ်တော်ကြီးက စဉ်းစားဘို.ပါဘဲ။ ကျွန်တော်တို. အခု ဖြစ်နေတဲ့ ဗမာပြည်ရဲ့ အခြေအနေတွေကို ထောက်လို.ကြည့်ရင် ကျွန်တော်တို. နိုင်ငံတော်ကို ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံတော်အဖြစ်နဲ. ဖွဲ.စည်း ထည်ထောင်မှသာလျှင် သင့်တော် လျှောက်ပတ်ပါလိမ့်မယ်လို. ယူဆတဲ့အတိုင်း ဒီအခြေခံသဘောထားကို ဒီအဆိုထဲမှာ ထည့်သွင်းပြီး ဒီမှာ တင်ပြထားခြင်းအားဖြင့် ယခု တိုင်းပြုပြည်ပြု လွတ်တော်ကို ကြွရောက်လာတဲ့ တောင်တန်းဒေသသားများက ကိုယ်စားလှယ်အမတ်များဟာ ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံတော်တွင် သူတို. သက်ဆုိုင်ရာနယ်များ ပါဝင်ပြီးသား ဖြစ်သွားမလား ဆုိုပြီး သံသယရှိနေတယ်လို. ကျွန်တော်သိရပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီကိစ္စနှင့်ပတ်သက်လို. တိတိလင်းလင်း ရှင်းချင်တာကတော့ ဗမာပြည်ထောင်စု နိုင်ငံတော်လို. ခေါ်တွင်ဘို.ဆိုပြီးတော့ အဲဒီအထဲမှာ တင်ပြထားပေမယ့် ဒီပြည်ထောင်စု နိုင်ငံတော်ထဲမှာ ဘယ်နယ်တွေပါပြီး ဘယ်နယ်တွေ ပါရမယ်လို. သတ်မှတ်ထားခြင်း မရှိသေးပါဘူး။
“ သည်တော့ တောင်တန်းဒေသကနေပြီး တက်ရောက်လာကြတဲ့ ကုိုယ်စားလှယ်တွေဟာ ဘာမှ ဒီကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်စရာ အလျှင်းမရှိပါဘူး။
“ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်ထဲမှာ ကိုယ်ပါချင်မှ ကိုယ့်နယ်ဆိုင်ရာကနေပြီး ပါချင်မှ ပါနိုင်တာဘဲ။
“ ဒီ တိုင်းပြူပြည်ပြု လွတ်တော် မဖွဲ.စည်းမီအခါမှာ တိုင်းပြုပြည်ပြု လွတ်တော်ဖွဲ.စည်းရန် ကျွန်တော်တို. သဘောတူညီချက်တွေ စာချုပ် အမျိုးမျိုး ချုပ်တဲ့အခါတုန်းက တောင်တန်းဒေသက ကိုယ်စားလှယ်များနဲ. ကျွန်တော်တို. ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ စာချုပ်အရဆိုရင်ဖြစ်စေ၊ နောက်ပြီးတော့ တောင်တန်းဒေသဆိုင်ရာ စုံစမ်းရေး အစီရင်ခံစာမှ ထောက်ခံချက်များကို ကျွန်တော်တို. လက်ခံလာသည့်အတိုင်းဖြစ်စေ အဲသည်လို လက်ခံထားတဲ့ စာသဘောတင်မကဘဲ ( Not only the Letter of agreement) ဒီစာသဘောကို ကျွန်တော်တို. သဘောတူညီ လာခဲ့ဒါတင်မကဘဲ ကျွန်တော်အဖို.မှာ ဆိုလို.ရှိရင် ( The Spirit of the agreement) သဘောတူညီလာခဲ့တဲ့ တကယ့် အရင်းခံ သဘောတရားကို လက်ခံပြီး ဒီအတိုင်းဘဲ တိုင်းပြုပြည်ပြု လွတ်တော်မှာ လုပ်ပါဆိုတာ တောင်တန်းနယ်ဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်များ တိတိလင်းလင်း နားလည်စေချင်ပါတယ်။
“ ကျွန်တော်တို. ပေးပြီးသား ကတိ၊ နားလည်ပြီးသား သဘော တူညီချက်တွေကို နယ်ချဲ.သမားတွေလို ကျွန်တော်တို. ဖောက်ဖျက်ခြင်း မလုပ်ပါဘူး၊“ အဲဒီလို ပေးပြီးသား ကတိနဲ. နားလည်ပြီးသား သဘောတူညီချက်တွေကို ဖောက်ဖျက်မလားလို. သံသယရှိခဲ့တဲ့လူတွေဟာ ဥက္ကဌမင်း ခွင့်ပြုချက်အရ ပြောရရင် ကျွန်တော်ရဲ့ ( Sense of honour, sense of self-respect, sense of pride) တို.ကို စော်ကားတယ်လို. ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။
“ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို. ပေးပြီးကတိ၊ နားလည်ပြီးသား သဘောတူညီချက်အရ တောင်တန်းနယ်တွေက ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ တိုင်းပြုပြည်ပြု လွတ်တော်ထဲ ရောက်လာတဲ့အခါ သေသေချာချာ နားလည်စေချင်တာက ဘယ်နည်းနှင့်မှ ကျွန်တော်တို. ဗမာလူများစုဖြစ်တဲ့ လူတွေဟာ ခင်ဗျားတို.ကို အတင်းအားဖြင့် ကျွန်တော်တို. ပြည်ထောင်စုထဲကို မသွင်းပါဘူး။
“ သဘော မတူဘဲ မနေနိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုးကို လက်တလုံးခြား လိမ်တဲ့နည်းနဲ.လဲ ကျွန်တော်တို. မလုပ်ပါဘူးဆိုတာ အတိအလင်း နားလည်စေချင်ပါတယ်။“ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော် ထပ်ရှင်းချင်တာက တနေ.တုန်းက ကျွန်တော်ဆီ စာတစောင် ရောက်လာပါတယ်။ အမှန်စင်စစ်က ကျွန်တော်တို. တောင်တန်းနယ် ကိုယ်စားလှယ်များ ပြောလို.လား ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်လဲ တောင်တန်းနယ်ဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားရေးဝန်က သူ.ဖာသာ အနေသာကြီး မြင်းကမလှုပ် ခုံကလှုပ်တာလား ဒါတော့ ကျွန်တော် မပြောတတ်ဘူး။
“ သို.သော်လဲ သူ.ဆီကတဆင့်နေပြီးတော့ တောင်တန်းဒေသ ဆိုင်ရာ ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး တိုင်းပြုပြည်ပြု လွတ်တော်မှာ ဆွေးနွေးတဲ့အခါ အင်မတန် စိုးရိမ်ကြောင်းကြနေတဲ့အကြောင်း ကျွန်တော် စာတစောင်ရပါတယ်။
“ ဒီတိုင်းပြုပြည်ပြု လွတ်တော်ရုံးကလဲ ရသလား မပြောတတ်ဘူး။ အဲဒီစာထဲမှာ ဘာ ပါသလဲဆိုရင် ကျွန်တော် မှတ်မိသလောက် ပြောရရင် တောင်တန်းနယ်ဆိုင်ရာ ကိစ္စအရပ်ရပ် ကို ဒီတိုင်းပြုပြည်ပြုလွတ်တော်ကနေပြီး ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါ ဆိုင်ရာဆိုင်ရာနယ်ရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်များ စုရုံးသဘောတူညီချက် မရဘဲနှင့် တိုင်းပြုပြည်ပြု လွတ်တော်ကနေပြီး မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်တို. တောင်တန်းနယ် စုံစမ်းရေးအဖွဲ.တုန်းက ထောက်ခံချက် ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါလဲ အမှန်စင်စစ် ကျွန်တော်တို. အကြံပေးတဲ့အတိုင်း ထည့်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
“ အဲဒီမှာဆိုရင် ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်တော် အချင်းချင်း လူများစု-လူနည်းစု မဖြစ်ဘဲနဲ. သဘောကွဲလွဲတဲ့ နေရာမှာ ညီတူ မျှတူ သဘောကွဲလွဲနေကြရင် ဘယ်လိုနည်းနဲ. တိုင်းပြုပြည်ပြု လွတ်တော်က နေပြီး ဆုံးဖြတ်မလဲဆိုတဲ့ ဒီမေးခွန်းကို တောင်တန်းနယ်ဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်တော်တွေဟာ ဒီလိုတော့ လာမမေးကြပါဘူး။
“ သို.သော်လည်း မဆိုင်တဲ့ တောင်တန်းနယ်ဆိုင်ရာ ဌာန ညွှန်ကြားရေးဝန်ကနေပြီး နှိုးဆော်ချက်အရ ဘုရင်ခံမင်မြတ်ကြီးကနေပြီး စိတ်ပူပြီး မေးတယ်။ ကျွန်တော့်သဘောမှာ ဒါဟာ စည်းကမ်း နည်းလမ်း မမှန်ဘူးလို. ယူဆတယ်။ ဘာဖြစ်လို.လဲဆိုရင် ယခုပြောဆိုနေခြင်းဟာလဲ တောင်တန်းနယ် ဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်များကနေပြီးတော့ အင်္ဂလိပ်သွားကပ်တယ်လို. ကျွန်တော် မဆိုလိုပါဘူး။
“ သို.သော် ဒီ တိုင်းပြုပြည်ပြု လွတ်တော်က ဆုံးဖြတ်တဲ့ ကိစ္စမှာ အင်္ဂလိပ်ရဲ့ အကာအကွယ်ကို ငါတို.တော့ဖြင့်ယူမှ ချမ်းသာရာရမယ်လို. ထင်ရင် ကျွန်တော် ရှင်းရှင်းလေး ပြောချင်ပါတယ်၊ အင်္ဂလိပ်ဟာ အမှန်စင်စစ် အနှေးနှင့် အမြန် သူ လက်အောက်ခံ တိုင်းနိုင်ငံတွေက ထွက်သွားရတော့မှာဘဲ။ ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုဖြစ်နေပြီ။
“ ကမ္ဘာ. အလားအလာ ကြီးထဲမှာ ဒီလို စိတ်ထားတွေ ရှိတဲ့လူတွေဟာ ကိုးကွယ်ရာ ဘယ်နည်းနဲ.မှ ရှိမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို ကျွန်တော် သတိပေးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို. တိုင်းပြုပြည်ပြုလွတ်တော် အကြောင်း ပြောရရင် အင်္ဂလိပ်ရဲ့ အကူအညီနဲ.မှ ဒီတိုင်းပြုပြည်ပြု လွတ်တော်ကို လာပြီးတော့ သြဇာ မပေးနိုင်ဘူးဆိုတာကို သိစေချင်တယ်။
“ ဒီတိုင်းပြည်ပြု လွတ်တော်မှာ တောင်တန်းဒေသဆိုင်ရာ ကိစ္စတွေကို စဉ်းစားဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာ ခင်ဗျားတို. သက်ဆိုင်ရာ တောင်တန်းနယ် ကိုယ်စားလှယ် အချင်းချင်း ဘယ်သူ. ဘယ်သူမှ မဲမသာဘဲ တူနေကြတယ် ဆိုရင် ဒီလွတ်တော်ထဲမှာ ဖဆပလ အမတ်အများဆုံးဖြစ်တဲ့အတိုင်း အများဆုံးရဲ့ ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ကျွန်တော် တိတိလင်းလင်း ကတိပေးလိုတာက ခင်ဗျားတို. အချင်းချင်း အဲဒီလို ဘယ်သူ.ဘယ်သူကိုမှ မဲမသာဘဲနှင့် မဲပြိုင်နေကြတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို. ဒီတိုင်းပြုပြည်ပြု လွတ်တော်ကနေပြီးတော့ အတင်းဖိပြီးတော့ မဆုံးဖြတ်စေဘူး ဆိုတာကို ကျွန်တော် ကတိပေးပါတယ်။
"အဲဒီတော့ တောင်တန်းနယ်ဆိုင်ရာ ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို.ရဲ့ စေတနာဟာ အင်မတန် ရှင်းပါတယ်။
"ကျွန်တော်တို. တင်သွင်းတဲ့ အဆို ပြုပြီးတဲ့နောက် ဆက်လက်တော့ကာ ဒီပြည်ထောင်စု ဖွဲ.စည်းတဲ့နေရာမှာ ပြည်ထောင်စုထဲ ပါချင်တဲ့ ပြည်နယ်တွေဟာ ဘယ်လို အချက်အလက်တွေ ဘယ်လို အခွင့်အရေးတွေ ဘယ်လို အခြေခံတွေ အဲဒီလို အချက်အလက်တွေအရ စုပေါင်းသင့်တယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စတွေ ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို. တင်သွင်းတဲ့အဆိုတွေ ကျွန်တော်တို. တင်သွင်းတဲ့အကြံဥာဏ်တွေ ဒါတွေကို သဘောမကျလို ဆိုလျှင် သဘောမတူတဲ့အတိုင်း တောင်တန်းနယ်ဘက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ သဘောရှိ ဗမာပြည်နှင့် မပေါင်းဘဲ နေချင် နေနိုင်ပါတယ်။
"ဒါ ယနေ. ကျွန်တော်တို. ဒီ တိုင်းပြည်ပြု လွတ်တော်မှာ ဒီစကားကို ပြောချင်းဘဲ။ ကျွန်တော်တို. စေတနာကို ဘယ်လောက်ထိအောင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြတ်ပြတ်သားသား ထားတယ်ဆိုတာကို သိစေချင်လို. ပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး တချက် ဒီလိုခင်ဗျားတို. သဘောမတူလို.ရှိရင် မပါချင်နေလို. ပြောတဲ့နေရာမှာလည်း နယ်ချဲ.သမားလို တဖက်ကနေပြီးတော့ကာ မပါချင် နေပါကွာလို. ဆိုပြီးတော့ မပါဘူးလို.ထင်တဲ့အခါကျတော့ တဖက်က ၀င်ပြီးတော့ မရှုပ်ဘူး။ သို.သော်လည်း ကျွန်တော်တို. အမြင်တော့ ရှိတယ်။"ဘယ်နိုင်ငံ ဘယ်နယ်မှာဖြစ်ဖြစ် ယခုခေတ်မှာ ဘယ်တိုင်းပြည် ဘယ်နိုင်ငံမှ ကမ္ဘာကြီးမှာ ဖြစ်နေတဲ့ဝါဒနဲ. ကမ္ဘာကြီးမှာ ဖြစ်နေတဲ့ အရေးကိစ္စတွေရဲ့ ဂယက် အရိုက်မခံရတဲ့ နယ်ရယ်လို. ရှိမှာ မဟုတ်ဘူး။
"ဒီမိုကရေစီ ၀ါဒ ဒီမိုကရေစီစနစ် ဒီမိုကရေစီသဘောတရားတွေ ခေတ်စားနေတဲ့ ဒီကမ္ဘာကြီးမှာ ဒီမိုကရေစီ သဘောထားနိုင်တဲ့နယ်ဟာ အနှေးနှင့်အမြန် ဒီနယ်မှာ ရှိနေတဲ့ လူတွေ နိုးကြား ထကြွလာပြီး ဒီလို ကမ္ဘာကြီးရဲ့ သဘောတရားတွေနဲ. ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ခေတ်သဘောတရားတွေနဲ. ဆန်.ကျင်ဘက် သဘောတရားတွေကို တွန်းလှန်ပစ်ကြမှာဘဲဆိုတာ ကျွန်တော် နိမိတ်ဖတ်ထားချင်ပါတယ်။
"အဲဒီတော့ ဒီလို ကျွန်တော်နားလည်ထားတဲ့အတိုင်း ကျွန်တော်တို.နှုင့်အတူ ပါပြီး မလုပ်ချင်ပါဘူးဆိုရင် ကျွန်တော် အတင်း မတိုက်တွန်းပါဘူး။"အဲဒီလို မပါ ပါအောင်ဆိုပြီးတော့ကာ ဒါကတော့ ဗမာ့စကား မဟုတ်ဘူးထင်တယ်။ ကျွန်တော် နားလည်ထားသလောက် ကရင်စကားဘဲလို.ထင်တယ်။ အတင်းနယားပါးယား လုပ်တဲ့နည်းမျိုးကို မလုပ်ပါဘူး။ အဲဒါကို တိတိလင်းလင်း တောင်တန်းနယ်ဘက်က ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေများကို ကျွန်တော်နားလည်စေချင်ပါတယ်။
"ဘာဖြစ်လို.လဲဆိုရင် ကျွန်တော်တို. အင်မတန် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သဘောထားနေတဲ့ အထဲကနေပြီးတော့ ရှုပ်အောင် လုပ်နေတဲ့ လူတွေက ယခုတလောမှာ တော်တော် များနေတော့ ဒါကို ရှင်းလင်းသထက် ရှင်းအောင်ထပ်ပြီး ပြောရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေ တယောက်က ကျွန်တော်ကို ပြောသလိုဘဲ ခင်ဗျား အဲဒီလို ရှင်းရှင်းပြောဒါကို သူတို.စိတ်ထဲမှာ ရှုပ်နေတယ်ဆိုတော့ အဲဒါတော့ မတတ်နိုင်ဘူး။
"အဲဒီတော့ ဒီပြည်ထောင်စုနိုင်ငံမှာ ဘယ်နယ်တွေ ပါရမယ် ဆိုတာ ကျွန်တော်တို. ဒီအထဲမှာ ထည့်ထားဒါလဲ မရှိသေးပါဘူး။ ပါချင်တဲ့လူတွေမှ ပါကြ။ အဓိပ္ဗါယ်က နယ်ကို သတ်မှတ်မထားဘဲနဲ. ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်လို.သာ သာမည ထည့်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အ ထက်ပါ မိန်.ခွန်းကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အလုပ်ကြံ မခံရမှီ ရက် ၁ လနှုင့် ၃ ရက် အလိုမှာ ပြောကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါသည်။
ဒါအပြင် ပင်လုံစာချုပ် ချုပ်ဆိုပြီးမှ ပြောကြားခဲ့သော ဖွဲ.စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးအတွက် လမ်းညွှန်ချက် အဆိုလည်း ဖြစ်တာမို. ပင်လုံစာချုပ် ချုပ်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်က မလိမ့်တပတ်လုပ်ပြီး ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံကို တည်ထောင်ခဲ့ တာလို. မဟုတ်မဟတ် စွပ်စွဲပြီး ဗိုလ်ချုပ်ကို စော်ကားနေတဲ့ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တချို.အတွက်လည်း စဉ်းစား ဝေဖန်နိုင်ဖို. အကောင်းဆုံး သမိုင်း အထောက်အထားပါ။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ မကျဆုံးခင် တလကျော်ကျော်အချိန်အထိ တောင်တန်းဒေသကိုယ် စားလှယ်တွေအနေဖြင့် “ ခင်ဗျားတို. သဘောမတူလို.ရှိရင် မပါချင်လဲ နေလို.ရကြောင်း” အတိအလင်း ပြောဆိုထားတာဖြစ်လို. ပင်လုံစာချုပ် ချုပ်ပြီး တိုင်းရင်းသားတွေကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက မလိမ့်တပတ်လုပ်ပြီး ပြည်ထောင်စုကို လုပ်သွားတာ ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေ မဟုတ်မမှန်ကြောင်း သက်သေထင်ရှာစေပါသည်။
အောင်ဆန်း-အက်တလီစာချုပ်ကို ၁၉ ၄၇ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၂၇ ရက်နေ.မှာတွင် အင်္ဂလန် နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို.မှာ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ.ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် အင်္ဂလိပ် ၀န်ကြီးချုပ် အက်တလီတို. လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ၄င်းလည်းစာချုပ်တွင်း ပင်လုံညီလာခံ ကျင်းပပြီး တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ တောင်တန်းဒေသက လူတွေရဲ့ သဘောထား ဆန္ဒကို မေးမြန်းရယူပြီး ပြည်မနှင့် ပေါင်းရေး မပေါင်းရေး သဘောထားရယူရမည်ဟု အောင်ဆန်း-အက်တီစာချုပ် အပိုဒ်(၈) အပိုဒ်ခွဲ(ခ)မှာ ကြိုတင်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက် Pre-condition တခုကို အင်္ဂလိပ်အစိုးရက စာချုပ်မှာ ကြိုးချည်ထည့်ပေးထားသည်။ ဒါကြောင့်လည်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေနှင့် ၂ ပတ်အတွင်း ပင်လုံမှာ တွေ.ဆုံ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီး ပင်လုံစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေး ထိုးခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ပင်လုံစာချုပ် ချုပ်ဆိုရင်ခြင်း ပင်လုံညီလာခံ ကျင်းပခဲ့ရခြင်းဟာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ဆန္ဒအရ လုပ်ကိုင်ခဲ့ရခြင်းထက် အောင်ဆန်း-အက်တလီစာချုပ်မှာ ကြိုတင်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်အရ ပြောရလျင် အင်္ဂလိပ်အစိုးရ၏ လိုအင်ဆန္ဒ စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်အရ အရေးပေါ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုလျှင် မှားမည် မထင်ပါ။ အကြောင်းကတော့ အောင်ဆန်း-အက်တလီစာချုပ်မှာတင် ပင်လုံညီလာခံ သို.တည်းမဟုတ် အထူးညီလာခံတခု လုပ်ပြီး တိုင်းရင်းသားတွေ၏ ဆန္ဒသဘောကို ရယူရမည်ဟု အင်္ဂလိပ်အစိုးရက ကြိုတင်စည်းကမ်းချက်ဖြင့် ကြိုးချည်ခဲ့ခြင်းကြောင့်သာ ဖြစ်ပါသည်။
ဒါကြောင့် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ.တချို.က ပင်လုံညီလာခံကို အခြေခံပြီး နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးအဖြေရှာမှုတွေ လုပ်ရမည်ဟု တောင်းဆိုနေခြင်းဟာ လက်ရှိ အချိန်အခါနှုင့် လိုက်လျော် ညီထွေမှု သင့်တင်မှု ဖြစ်နိုင်ပါသေးရဲ့လား မေးစရာ တွေးစရာ စဉ်းစားရမည့် အချက် ဖြစ်ပါသည်။
ပင်လုံစာချုပ်မှာ လက်မှတ် မရေးထိုးခဲ့သည့် တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်တွေ ရှိခဲ့သလို ပင်လုံ ညီလာခံမှာ မတက်ပဲ လက်မှတ် မထိုးပဲ ပြည်ထောင်စုထဲ ပါလာရသူတွေလဲ ရှိပါသည်။ ထို.အပြင် ပင်လုံစာချုပ်ကြောင့် ပြည်ထောင်စုကြီး ဖြစ်လာရသည်ဟု ပြောဆိုချက်သည် တစိတ်တပိုင်းအရ မှန်ကန်သော်လည်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပြောကြားခဲ့သော် ၁၉ ၄၇ ခု ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေမှာ ပြောဆိုခဲ့သော တင်သွင်းခဲ့သော တိုင်းပြုပြည်ပြု လွတ်တော် မိန်.ခွန်း--
“ဖွဲ.စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေနှင့် ပတ်သက်သည့် လမ်းညွှန်ပြဌာန်းချက်အဆို Directive Resolution” အရ ဆိုလျင် တောင်တန်းဒေသ တိုင်းရင်းသားတွေအနေဖြင့် အသစ်ဖွဲ.စည်းမည့် ပြည်ထောင်စုကြီးထဲတွင် သူတို. သဘောတူ ဆန္ဒပါမှသာ ပြည်ထောင်စုထဲကို ပါလို.ရတယ်။ သဘောမတူဘူး မပါချင်ဘူးဆိုရင်လဲ မပါပဲ နေချင်နေပါဆိုပြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုယ်တိုင် မသေခင် တလကျော်ကျော်အထိ ပြောဆိုထားတာမို. ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေမှာ ချုပ်ဆိုတဲ့ ပင်လုံစာချုပ်အရ တိုင်းရင်းသားတွေအနေဖြင့် ပြည်ထောင်စုထဲ အလိုလို ပါလာခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်ဟု ယူဆရန် ခက်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ပင်လုံစာချုပ်ဟာ ပြည်ထောင်စုကြီးဖြစ်ဖို.အတွက် ဆက်စပ်မှုတော့ ရှိတာ မှန်သော်လည်း ပင်လုံစာချုပ်ကြောင့် ပြည်ထောင်းစုကြီး ဖြစ်လာရသည်ဟု တိုက်ရိုက် ပြောရန် ခက်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုယ်တိုင် ပင်လုံစာချုပ် ချုပ်ဆိုပြီးမှ အထက်ပါ မိန်.ခွန်းကို တရားဝင် တိုင်းပြုပြည်ပြု လွတ်တော်မှာ သူရဲ့သဘောထား သူရဲ့ စေတနာကို အတိအလင်း ပြောဆိုခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
မှတ်ချက်၊ ။ ဦးအောင်သန်း၏ အောင်ဆန်း မိသားစု စာအုပ်မှ ဗိုလ်ချုပ်မိန်.ခွန်းကို ကိုးကားကောက်နှုတ်ကာ သုံးသပ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။